सिल्टल: गुगल एनालिटिक्समा स्पाम र घोस्ट रेफरलहरू पहिचान गर्दै
गुगल एनालिटिक्स 2005 मा यसलाई सुरुवात पछि ट्रान्सफर, निगरानी र रिपोर्ट वेबसाइट ट्राफिक प्रयोग गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण हो। यो विश्लेषणात्मक उपकरण हालैका समयमा छलफलको विषय रहेको छ वेब ट्राफिक तथ्याङ्कहरू। Google विश्लेषणात्मकमा भूत र स्प्याम रेफरलहरू वेबसाइट प्रशासकलाई गलत जानकारी देखाउने सबैभन्दा प्रभावशाली गतिविधिहरू हुन्।
यस लेखको बिरुद्ध जैक मिलर, सेल्टल्ट वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धकले स्प्याम र भूत रेफरलहरूमा जानकारी दिन्छ जसले ट्रोजन, मालवेयर र भाइरस आक्रमणहरू कम्प्युटर प्रणालीहरूमा लिङ्क गर्दछ।
स्पैम रेफरल - के तपाईं उनलाई जान्दछन्?
गुगल एनालिटिक्स कहिलेकाहीँ वेबसाइटको बारेमा चिन्ताजनक ट्राफिक तथ्याङ्कहरू देखाउन सक्दछ। एक दिन एक साइटमा यातायात प्रवाह कम छ र अचानक पर्याप्त ट्रिगर बिना गोली उठाउँछ। ट्राफिकमा भिन्नता एक वेबसाइटको प्रवाहबाट नाटकीय रूप देखि एक दिन बाट उच्च देखि वा केही घण्टा भित्र बिना वेब आगन्तुकहरु जहाँ जान्छ भनेर जान्न परिवर्तन गर्दछ। स्प्याम सन्दर्भहरू वेबसाइटमा नकली ट्राफिक उत्पन्न गर्न सक्छ, जुन अन्यथा Google Analytics मा प्रतिबिम्बित गर्दछ। स्पाम र भूत रेफरलहरू, मालवेयर र भाइरस पत्ता लगाउन उचित निगरानी प्रणालीको बिना प्रणाली पनि प्रणाली आक्रमण गर्न सक्छ। नकली दर्शकहरूले साइटको मालिकलाई झूटो आशाको निर्माण गर्नका लागि उनीहरूलाई धेरै राजस्व अस्वीकार गर्न सक्छन्। Source - box shaped vape.
स्पाम र भूत रेफरलहरू गुगल एनालिटिक्समा गलत तथ्याङ्कहरू दर्ता गर्छन्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू जुन वास्तविक ट्राफिकको रूपमा वेबसाइट रेजिस्टर भ्रमण गर्दैनन्। स्प्याम ट्राफिकले ट्रोजन, भाइरस, र मैलवेयर जस्तै वेबसाइटको मालिकलाई राजस्व हानि सिर्जना गर्न सक्छ। स्प्याम ट्राफिकको रोकथाम र हटाउनाले सही ट्राफिक तथ्याङ्कहरूको सुविधा लिन सक्छ।
स्पैम को प्रकार
त्यहाँ दुई प्रकारका स्प्यामहरू छन् जुन Google Analytics मा दर्ता गरिएको वेबसाइटमा आगन्तुकहरूको वास्तविक तथ्याङ्कहरू उल्टाउँछ। स्पाम वा स्प्याम रेफरल वा भूत रेफरल हुन सक्छ। भूत रेफरलहरू साइटमा नभएसम्म वेबसाइटमा वास्तविक आगन्तुकहरूको रूपमा दर्ता गर्दा, स्प्याम रेफरलहरूले वेबसाइटमार्फत स्वचालित रूपमा खोजी गर्ने काम गर्दछ जुन डेटा खराब हुन्छ। मैलवेयर र भाइरस जस्तै, वेबसाइटमा वैधता सिर्जना गर्न स्पामलाई उन्मूलन चाहिन्छ।
स्पाम आवागमन को पहिचान गर्नुहोस्
सबै लिङ्कहरू ईमेल, वेबसाइट, र सोशल मिडियाको माध्यमबाट लिंक गरिएको छैन कम्प्युटर सुरक्षाको लागि अनुकूल छ। धेरै सतर्कता संग उल्लिखित लिंक क्लिक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। साझा लिङ्कहरू मैलवेयर, भाइरसहरू र ट्रोजन डाउनलोड गर्न सक्छन् कम्प्युटरमा गम्भीर चोटको कारण। एंटीवायरस सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै इन्टरनेटमा जडान गर्नु अघि प्रणालीको सुरक्षा निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ।
डेटा मा स्पैम रेफरल लिंक ढूंढना
गुगल एनालिटिक्स खातामा प्राप्त अधिग्रहण सेक्शन मा सबै ट्राफिक अन्तर्गत रिफरलहरू मेनु वेबसाइटको आगन्तुकहरूको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ। "उन्नत" लिङ्कमा क्लिक गर्नाले सत्रहरू फाईल गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। एक चोटि 10 भन्दा बढी पटक लिङ्कको भ्रमण गर्दा ठूलो संख्यामा यातायात तथ्याङ्कहरू प्रभावित हुन सक्छ र स्प्याम रेफरलहरूबाट परिणाम हुन सक्छ।